HTC One M9 Nyochaa | Akụkọ akụrụngwa
Ke akpatre Mobile World Congress ẹkenịmde ke obio Barcelona, ​​HTC eze ọkọnọ ya ọhụrụ flagship, na HTC One M9, nke nwere ihe yiri nke onye bu ya ụzọ na nke ka mma, na-anwa inweta akara n'ahịa ahụ, na-agabiga ihe isi ike dị iche iche n'ihi ntakịrị ihe ọhụụ ya na nsogbu ya, ọkachasị dị na nhazi ya.
Solve na-edozi ọtụtụ nsogbu, Ugbu a nsogbu bụ na ọ dịghị ihe karịrị ijide ya n'aka gị ị ga-enweta mmechuihu na anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu ihe. N'ezie, nke ịrụ ụka adịghị ya, ma otu nke otu ihe na-enweghị ihe ọhụụ.
2 Main Atụmatụ na nkọwa
3 Nyochaa vidiyo nke HTC One M9 a
4 Ndị agha, onyinyo na ọkụ
5 Ndi HTC One M9 a kwesiri ka enyo a di njo?
7 Ahụm aka m na HTC One M9 a
8 Nye ọnụahịa na nnweta
The imewe bụ ịrụ ụka adịghị otu n'ime ihe na-azọpụta site na nke a HTC One M9 na bụ na n'agbanyeghị ebe ị anya, ọ bụ n'ihi na ọ fọrọ nke nta onye ọ bụla a mara mma, n’agbanyeghi na onwere ndi n’achoghi. Agbanyeghị, imewe ahụ nwere ihe ọhụụ ole na ole ma e jiri ya tụnyere ihe anyị hụrụ na HTC One M8, nke doro anya wepụrụ ohere nke ịtụnanya anyị.
Site na ahụ aluminom ọ na-enye anyị mmetụta na anyị na-eche ihu a na-akpọ elu-ọgwụgwụ ama, ọ bụ ezie na ọ dị n'azụ, dịka ọmụmaatụ, site na Samsung Galaxy S6 Edge na iko ya mechara. Na mgbakwunye na nwute, imewe ahụ kariri otu ihe ahụ n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ na njiri oji ojii dị n'ihu nke anyị nwere ike ịhụ na M8 ka dị.
Banyere akụkụ ya, anyị na-ahụ etu ịdị elu nke HTC One M9 a si belata ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ, mana etu ọkpụrụkpụ ya si eto na 9,6 millimeters. Ogo ya dị gram 157 na-anọgide na akara na ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ na ahịa.
Na iji mechaa atụmatụ nke ọnụahịa a na otu anyị si mara na ọ bụ karịa Anyị na-aga n'ihu na-ahụ ọkà okwu ihu abụọ, nke doro anya bụ otu n'ime nnukwu nzo nke ọhụụ HTC kachasị ọhụrụ. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, anyị nwere ike ịgwa gị na Otu M9 a dị ezigbo mma.
Main Atụmatụ na nkọwa
Ọzọ anyị ga-edepụta isi atụmatụ na nkọwa nke HTC One M9 a;
Ihe atụ: 144,6 x 69,7 x 9,61 millimeters
3-anụ ọhịa IPS SuperLCD1920 FullHD (1080 × 5) ngosi na Gorilla Glass 4 - 441ppi
Qualcomm Snapdragon MSM8994 processor (4xCortex A53 na 1.5GHz + 4xCortex A57 na 2.0GHz)
Adreno 430 GPU Graphics Nhazi
3GB LPDDR4 RAM na 32GB nchekwa dị n'ime + microSD ruo 128GB
Igwefoto na-abịa: 20.7MP f / 2.2 BSI sensor
Igwe n'ihu: BSI UltraPixel 4MP f / 2.0 sensor
2840 mAh batrị (enweghị ewepu)
WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth LE 4.1, ihe mmetụta accelerometer, idi nso, gyroscope
Android 5.0.2 Lollipop sistemụ arụmọrụ na Sense 7.0
Nyochaa vidiyo nke HTC One M9 a
Ndị agha, onyinyo na ọkụ
Batrị nke HTC One M9 a ga-amalite site na ịsị na ọ bụ 2.840 mAh, nke toro ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị gara aga, na ekele maka akụkụ nke ụba nke ọnụ ọgụgụ a. Agbanyeghị, nnwere onwe abụghị iji gbaa rọketi ma anyị ga-erute na njedebe nke ụbọchị, ka osila dị, ịme ya nke ọma.
Isi okwu dị mma bụ na anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ya ngwa ngwa, nke na-akwụ ụgwọ maka obere ọchịchị obodo nke batrị ga-enye anyị, nke ekwesịghị ikwe ka anyị jiri ya mee ihe 2.840 mAh.
Ndi HTC One M9 a kwesiri ka enyo a di njo?
Ihuenyo nke HTC One M9 anyị nwere ike ikwu na enweghị obi abụọ ọ bụghị ihe anyị tụrụ anya ya, ma ọ bụrụ na anyị elee anya na mpempe akwụkwọ ndị ọzọ dị elu anyị ga-ahụ QHD ma ọ bụ ọbụna mkpebi 2K. Ọnụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Taiwanese na-agbakwunye ihuenyo 5-inch na mkpebi 1920 × 1080 FullHD, na njupụta nke pikselụ 441 kwa inch. Ruo ugbu a ihe niile ga-agabiga, mana anyị anọghị ọbụna n'ihu panel ahụ guzobere HTC One M8, ọ ka dị n'okpuru.
Nke a na - eme ka ihe kachasị dị mma, yana ọdịiche dị iche, nke na - eme ka nlele nlele dị njọ, ịghara ịkpọ ya.
Ihuenyo adịghị mma, anyị nwere ike ịsị na o nwere ụfọdụ adịghị ike na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chere ya ihu, dịka ọmụmaatụ, LG G4 ma ọ bụ Galaxy S6.
O doro anya na igwefoto ahụ bụ otu n'ime isiokwu ndị na-echere HTC na na ọ jisiri ike dozie, karịa ma ọ bụ obere, na HTC One M9 a nke na-enye anyị igwefoto na a BSI sensor arụpụtara site na Toshiba ma nwee 20.7 megapixels ya na oghere f / 2.2.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na igwefoto a na-enye anyị ezigbo nsonaazụ, ihe ntanetị anya na-efu ọtụtụ, nke anyị hụrụ na njedebe ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọzọkwa, ọzọ anyị nwere ike ikwu na anyị na-atụ anya ihe ọzọ site na igwefoto a, nke na-enweghị njọ, dịka anyị kwurula abụghị ihe anyị tụrụ anya ya.
N'okpuru ị nwere ike ịhụ ọtụtụ onyonyo ejiri igwefoto nke HTC One M9 a;
Ahụm aka m na HTC One M9 a
Mgbe ị jiri HTC One M9 a mee ihe karịa izu abụọ, eziokwu bụ na hObi dị m ụtọ na imewe, ọ bụ ezie na m ga-ekwu na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri gị ike ịnara ya na ọ na-ajụ oyi. Ọzọ nke na-eme nke ọma bụ obi abụọ adịghị ya ọnụ na-enye anyị ya Snapdragon processor. Agbanyeghị, echere m na ọ gaghị enwe ike igosipụta ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ dị mma belụsọ ụda ahụ., na ọ bụ na ọnụ a na-enye gị ohere igwu egwu ma ọ bụ ụda ọ bụla nwere oke dị elu.
Ihuenyo ya abụghị ihe a na-atụ anya ya na n'okpuru, n'echiche m dị umeala n'obi, ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ dị elu, igwefoto, ọ bụ ezie na ọ dị mma, enwere ike ịbawanye mma na nhazi akwa anaghị eme ka m kwenye, ọkachasị mmegharị ndị na-abụghị Ntuziaka karịa na ngwanrọ ndị ọzọ na ọdụ ndị ọzọ.
Ikwubi, ọ na-esiri m ike ịsị, Echere m na enwere nhọrọ ka mma na ahịa maka otu ọnụahịa ma ọ bụ maka obere obere. Nke a HTC One M9 abụghị ekwentị ọjọọ, mana maka ọnụahịa ya na maka ihe niile anyị tụrụ anya na ya, ọ bụghị ruo par.
Nke a HTC One M9 dịworị adị na ahịa maka izu ole na ole ma anyị nwere ike ịchọta ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla, ma nke anụ ahụ ma nke mebere, maka ọnụahịa nke ihe dị ka euro 620. Nwere ike ịzụta ya dịka ọmụmaatụ na Amazon site na njikọ a.
Kedu ihe ị chere gbasara HTC One M9 a?.
Ihe owuwu na imewe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Anyị nwalere HTC One M9, nnwale ọhụrụ nke HTC na njedebe dị elu